Blood debt knows no negotiations Its not over, our turn is yet to come ✊🏻 (23rd May)
Events • May 23, 2021
そして、大変 お忙しい中、ご協力してくださったギターリストやカメラマンの方々、誠に有難う御座います。 🙏🙏
" Blood debt knows no negotiations
Its not over, our turn is yet to come "✊🏻
On today (23rd of May), TTAJ did pamphlet and pocket sharing activity at Akabane Station, Tokyo.
In order to make the receiving end feel safe, we conducted the CORONA procedures with extra care such as washing hands frequently, utilising gloves and Face Shield while handing out pamphlets in order to prevent CORONA infections.
We were able to hand out over 1600 pamphlets and 1600 pocket tissues from 3:00pm till 6:00 pm.
It really was an encouragement when Japanese didaThree fingers salute and courageous words
ယနေ့ ၅ လပိုင်း ၂၃ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Tokyo / Akabane ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်နေ့စဉ် Corona ကူးစက်နှုန်း မြင့်မားနေတဲ့အတွက် နာမည်ကြီးနေရာတွေကို ရှောင်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၏ စည်းကမ်းများနှင့် အညီ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
လက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၁၆၀၀ ကျော်နှင့် တစ်ရှူး အခုရေ ၁၆၀၀ ဝန်းကျင်ကို ဂျပန်ပြည်သူ/သားတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နွေဦးတော်လှန်ရေး၊ သွေးသစ္စာ၊ အလိုမရှိ ဆိုတဲ့သီချင်း၃ပုဒ်ကို ဂစ်တာတီးပြီး Performance ပြုလုပ်ကာ သံပြိုင်သီဆိုခဲ့ကြပါတယ် ။
ဂစ်တာတီးပြီး ပါဝင်အားဖြည့်ပေးတဲ့ အစ်ကိုများနှင့်တကွ အပတ်စဉ် ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယို မှတ်တမ်းကူညီရိုက်ကူးပေးသူများ အားလုံးကို TTAJ အဖွဲ့မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် 🙏